Blaogin'i tebokaefatra | Fizahantany |
29 Septambra, 2008 13:20
Fijery ambony (2)
Nampidirin'i tebokaefatra, Sokajy [	Fizahantany ]
Ity ny tohin'ny "Fijery ambony 1" ry namana mpiserasera isany ooo!
Niakatra ihany aho. Hay asiana fanavaozana koa ny Fiangonana miteny Frantsay Andohalo. Vakoka tsara karakaraina tokoa itony.
Betsaka koa ianareo no nahita soa tao amin’ny Lycée Gallieni na Andohako ankehitriny. Mbola mijoalajoala ihany hatramin’izao.
Lapan’ny Praiministra faha Mpanjaka no tena nahalala an’Andafiavaratra ary may dia nasiana fanamboarana na dia tsy vita hatramin’ny farany aza. Azon’ny fakantsariko nalaina sary tsara ihany anefa.
Teo akaiky teo ihany ny Fitsarana faha Mpanjaka. Tsara kosa fa sady mahazo rivodrivotra ny mpitsara sy ny voampanga.
Tonga teny an-tampony aho dia nifanatrika tamin’ny Lapan’ny Manjakamiadana. Tsy ilay alahelo tamin’ny fotoana nahamay azy intsony no tao am-poko fa endrika mirana feno fanantenana satria mandroso ny asa fanarenana rehetra.
Azo tsidihina tsara eny ary tamin’io Alakamisy 25 Septambra 2008 io dia izaho irery no netin’ilay mpiandry tànana, natorotorony sy nazavainy ny asa rehetra eny.
Voalohany notsidihinay ny Fiangonana izay efa vita tanteraka. Ny hany sisa tsy main’ny afo dia ny pilipitra hazo sy ny toerana fipetrahan’ny Mpanjaka dia ampahana gorodona kely eo amin’ny pilipitra. Ny sisa dia vaovao avokoa.
Nojerenay indray ny Lapa samihafa:
-Toa an’ny Besakana
-Toa an'ny Majakamiadana.
Toa izao kosa ny dobo fandroan’ny Mpanjaka.
Sy ny fasana nilevenany.
Izay no tao an-dRova.
Fa raha nitodika tany atsinananana aho dia izao no hitako.
Ny taty andrefana kosa dia izao no tazako.
Tapitra, fa mbola hitohy amin’ny faritra hafa indray ny “Fijery”.
NB: Azo tsidihina eny amin’ny Rova ny Alakamisy 6 Novambra 2008, ary tsy andoavam-bola.
Dia afaka miomana sahady isika izay, eto an-tanàna, ka liana .
27 Septambra, 2008 14:50
Fijery ambony (1)
[ (8) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Alakamisy 25 Septambra 2008. Tsy niasa aho androany dia nandeha nitsangantsangana. Tsy niaraka tamin’ny vady aman-janako anefa fa ny fakantsariko. Hijery ny hakanton’ny tanàna misy ahy dia Antananarivo Renivohitra sy ny zava-misy tsara ho fantatra.
Hanombohako ny fitsidihako dia iny tanàna ambony iny na “La Haute“. Tsy ny zava-kanto rehetra akory no entiko ho anareo fa izay hitan’ny fankantsariko ihany.
Dia mazotoa mijery sy mahay mankafy.
Sary: Ambohijatovo Ambany, sy ny vohitra Ambatonakanga ahitana ny Fiangonana
Teo Ambohijatovo Avaratra (JIRAMA) ihany aho no nitodika teny Ambatovinaky.
Sary: Ny Fiangonana Ambatovinaky
Tonga teo Andohalo aho dia sary maromaro no asehoko anareo.
Eo aloha ny fanamboarana ny zaridaina karakarain’ny Commune Urbaine Antananarivo, izay amperin’asa tokoa.
Nidina teo amin’ny faritry ny tanànan’ny Katolika Romana indray aho dia ireto no hitan’ny fankatsariko.
Sary: Izy no Jerome RAKOTOMALALA, Kardinaly Malagasy Voalohany
Sary: Katedraly Andohalo
Sary: Fasana misy ny Olontsambatra Victoire RASOAMANARIVO
Teo Andohalo ihany aho dia tsy naharitra ny mason’ny fankantsariko fa “nipika” ny Kianja be ny Mahamasina sy ny Lac Anosy